खानालाई स्वादिष्ट बनाउँन मात्र हैन कुन मसला के को उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? - DerbyKhabar
काठमाडौँ ३१ भदौ ।। मसलालाई दुई वटा फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । खानालाई स्वादिष्ट बनाउँन र लाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौ । त्यसो भए, थाहा पाउनुहोस् कुन मसला के को उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
पेट दुख्दा – पेट दुखेमा एक चम्चा घिउम हिंग मिसाएर पिउँनाले आराम मिल्छ । यसबाहेक पुदिना र कागतीको रसमा आधा चम्चा अदुवाको रस र थोरै कालो नुन मिलाएर पिउनाले राहत मिल्छ ।
रुघा–ज्वरोका लागि – रुघा–खोकी तथा ज्वरो जस्ता सामान्य रोगका लागि औषधि नलिनु भए राम्रो हुन्छ । औषधिको ठाउँमा कालो मरिच र ल्वाग सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईलाई विस्तारै राहत दिन्छ ।
दाँतको दुखाईका लागि – दाँत दुखेमा ल्वांगको प्रयोग गर्न सकिन्छ । नुन र कालो मरिचका एक चौथाई मिश्रणमा केही थोपा पानी मिलाएर लगाउँनाले पनि केही राहत मिल्छ । यसबाहेक ज्वनोको पातको तेल लगाउँनाले पनि दाँत दुखाईमा राहत मिल्छ । यदि तपाईसँग कुनै उपाय छैन भने तपाई काँचो प्याजको टुक्रालाई कम्तिमा ३ मिनेटसम्म चबाउँन सक्नुहुन्छ ।
टाउँको दुख्दा – टाउँको दुखाईको निदानका लागि दालचीनीलाई पानीमा मिलाएर बारिक पेस्ट बनाएर पेस्ट बनाउँनुहोस् । पेस्टलाई टाउँको लगाएर छोडिदिनुहोस् । यसबाहेक १०–२० ग्राम तुलसीको पात चबाउँनुहोस् वा यसको ‘काढा’ बनाएर पिउनुहोस् ।
यदि तपाईंलाई पेट दुखाई छ भने, तपाईं केहि घरेलु उपचार अपनाएर आराम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकालागि यी घरेलु उपचारहरूको बारेमा थाहा पाउनुहोस्
यी उपायले पेटको दुखाइको उपचार लागि काम गर्दछ यसले
पेट दुखाइको उपचारमा तुरुन्त राहत दिन्छ
पेट दुख्ने समस्या यस्तो छ कि एक व्यक्ति न आराम गरी बस्न सक्छ र न कुनै काम गर्न सक्छ। धेरै मानिसहरू प्राय: दुखाइको लागि रसायनिक औषधी लिन्छन्, जुन स्वास्थ्यको लागि राम्रो पक्कै हुँदैन। यस अवस्थामा, यो घरेलु उपचारहरू राम्रो विकल्प हो।
यी ५ खाने चिजले पेटको दुखाइ तुरुन्त कम गर्दछ
१ मेथीमेथीको दानालाई अलि हल्का भुट्नु होस् र त्यसपछि यसलाई ग्रैंडर मा वा ओखल मा पिसेर पाउडर बनाउनुहोस्। यसलाई एक चम्चाको मात्र मनतातो पानी सँग पिउनुहोस्। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि मेथीको दाना धेरै पाकेको हुनु हुँदैन र पिउने पानी पनि धेरै तातो हुनु हुँदैन।यसरि बिहान बेलुका वा पेट दुखाई सुरु हुने बित्तिकै लिन सकिन्छ यसले तुरुन्त दुखाई कम गर्छ र आराम मिल्छ ।
अदुवाअदुवालाई चियामा मिलाएर खाने बानि छ भने यस्तो पेट दुखेको समस्या खासै झेल्नु पर्दै यो राम्रो बनि हो तर तपाईंको यो बानि छैन र पेट दुखैले पिडा भैरहेको छ भने यसरि नै फिक्का चियामा अदुवाको टुक्राहरू उमालेर पिउनु पनि घरेलु उपचारको उपाए हो अझ राम्रो हुन्छ जब तपाईं अदुवाका केहि टुक्रालाई दुई कप पानीमा उमालेर एक कप जस्तो हुने गरि उम्लिएपछी थोरै मह मिलाएर पिउनु भयो भने यसले कमालको आराम दिन्छ।
तपाइको पेट दुखेको समस्यामा तुरुन्त राहत प्रदान गर्दछ।तर अदुवा राम्रोसँग उमाल्न नभुल्नुहोला जति बाक्लो सिरप बनाउनु हुन्छ यो औषधि तेतिनै असरदार हुन्छ एकै चम्चाले पनि काम गर्छ बिहान बेलुका यो पिउनु पेटको समस्या पूर्ण रुपमा हटेर जान्छ पुदिना पुदिनाका पातहरू चपाउनुहोस् वा एक कप पानीमा ४ वा ५ वटा पुदिनाका पातहरू उमाल्नुहोस्। त्यसपछि हल्का सेलाउन दिनिहोस र मनतातो भएपछी पिउनुहोस् यसपछि नियमित सेवन गर्नुहोस्।
एलोवेरा जुसएलोवेरा जुसले पेटको दुखाइमा ग्याँस, कब्जियत , पखालाबाट धेरै राहत दिन्छ। आधा कप एलोवेरा जुसले तपाईंको पेटलाई जलनबाट बचाउँछ।र शरीरमा फाइदा पुर्याउँछ कागतीको रसकागतीको रस संग कालो नुन र आधा कप पानी जोड्नुहोस्। यसलाई पिउने बित्तिकै, पेटको दुखाइमा कमी हुनेछ।
आज ६ बैशाख २०७८ सोमवारको राशिफल मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) महिला वा मित्र बाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । आर्थिक कारोबारमा सफलता पाइएला । लाभदायक यात्रा होला । बृष वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो) घरमा अतिथिको आगमन हुनेछ । एकपछि अर्को अवसर[Read More…]